बिदेशमा हुनुहुन्छ ? अब खाजा खाने पैसाले घर किन्नुस् ! १३८ रुपैयाँमा पाइन्छ पूरै घर ! – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /रोचक/बिदेशमा हुनुहुन्छ ? अब खाजा खाने पैसाले घर किन्नुस् ! १३८ रुपैयाँमा पाइन्छ पूरै घर !
काठमाडौं। मानिसहरुलाई एउटा राम्रो घर किन्न जीवनको अधिकांश कमाइ खर्च गर्नुपर्छ । जीवनभरको कमाइले घर किन्न नसक्नेहरु पनि धेरै छन् । तर, युरोपेली देश इटलीमा भने मात्रै १ युरो अर्थात १३८ नेपाली रुपैयाँमा सिंगै घर किन्न पाइएको छ । इटलीको सिसिली प्रान्तमा रहेको एउटा सानो शहरमा यति सस्तो मूल्यमा घर बेचिँदैछ । यो शहरको नाम सलेमी हो । यहाँ यति सस्तो मूल्यमा घर बेचिँदैछ भन्ने कुरा विश्वास गर्न निकै कठिन हुन्छ तर यो सत्य हो । र, यहाँ यति सस्तो मूल्यमा घर बेचिनुको पछाडि खास कारण छ ।